Building Construction and Infrastructure: Singapore: M&E and AutoCAD
ဒါကြောင့် Units တွေ Paper Sizes တွေ မှာ စင်္ကာပူ ရဲ့ အသုံးနဲ့ပဲ ရေးထားပါတယ်။ ဒီစာ က AutoCAD ကိုသိပြီး Construction Industry မှာ အသုံးချ လိုတဲ့ သူတွေ အတွက် မိတ်ဆက် သက်သက် ပဲ ရည်ရွယ် ပါတယ်။ M&E Systems တွေအတွက် အဓိက ရေးထားပေမဲ့ အခြား သူတွေ အတွက် လည်း အထိုက်အလျောက် အသုံးတည့် မယ်လို့ယူဆပါတယ်။ နောက် Basics ကို ကောင်းကောင်း နိုင်ပြီးသား သူတွေ အတွက် ရည်ရွယ်တာ မို့ AutoCAD ရဲ့အကြောင်းကို အသေးစိတ် ပြောမနေ တော့ပါဘူး။ အလုပ်လျှောက်တာတို့ အင်တာဗျူး ရဘို့တို့၊ အလုပ်လုပ်ခွင့် S-Pass တွေအကြောင်းကို တော့ နီးစပ်ရာ မှာ စုံစမ်းနိုင်ပါ လိမ့်မယ်.....
အခြေခံ Line, Cycle, Text, Arc, Polyline, Rectangle, Polygon တွေနဲ့ အတူ Snap ဘယ်လို ဖမ်းမလဲ သိရပါတယ်။ Point ကိုတော့ မဆွဲစေချင် သလို သုံးလည်းမသုံးစေချင်ပါဘူး။ အကြမ်းအားဖြင့် Snap ဖမ်းတဲ့အခါ။
New Drawing ဖွင့်တဲ့အခါ "acad.dwt" ကိုပဲ သုံးပါ။ AutoCAD LT ကို သုံးရမယ် ဆိုရင်တော့ "aclt.dwt" ကိုပဲ သုံးပါ။ "acad -Named Plot Styles.dwt" တို့ "acadiso.dwt" အစရှိတဲ့ တခြား Drawing Templates မသုံးပါနဲ့။
Command Prompt မှာ ddunits လို့ ရိုက်ချလိုက်ပါ။ Menu ကနေသွားရင် Format အောက်က Units ပါ။ Length: Decimal နဲ့ Angle: Decimal Degrees ကိုသုံးပါ။ 0.00 လောက်ဆိုရပါပြီ။ Insertion Scale မှာတော့ Milimeters ကိုသုံးပါ။ နောက် Options အောက်က User Preference - Tab အောက်မှာရှိတဲ့ Insertion Scale Source Content Units & Target Drawing Units တွေမှာလည်း Milimeters လို့ပြင်ပေးပါ။
မှတ်ချက်။ ။ တကယ်တော့ "acadiso.lin" က "acad.lin" နဲ့ စကေးချင်း ယှဉ်ရင် ၂၅.၄ ဆရှိပါတယ်။ ဆိုလိုတာက သူ့ကို (mm: millimeter) အတွက် သုံးဘို့ ဖြစ်ဟန် တူပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ "acad.lin" က အသုံးများတော့လည်း...
Scale အနေနဲ့ ပြောရင်တော့ A0 ကို 0.5 နဲ့ လုပ်ရင် A2 ရပါတယ်။ Scale ကို တစ်ဝက်လျှော့ရင် အလျား ရော အနံပါ တစ်ဝက်လျော့ သွားတာ မို့ Area က ( 0.5x0.5=0.25) လေးပုံတစ်ပုံ ဖြစ်သွားပြီး Size က နှစ်ခု ကွာသွားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဓိက သုံးကြတာ က Printer/ Plotter အကြီး မှာထုတ်ရင် A1, A0 အသေးမှာ ထုတ်ရင်တော့ A3, A4 ပါ။ A4 ထက်သေးတဲ့ ( A5 to A10) ကိုတော့ Construction မှာ သုံးလေ့မရှိပါဘူး။ နောက် B နဲ့ C sizes တွေကို သုံးတာလည်း မတွေ့ရပါဘူး။
SMACNA CAD Symbols - DWG Format
PUB (Singapore Public Utilities Board - http://www.pub.gov.sg) : Publications Website ဒီမှာ Sanitary, Sewerage, Storm Water Drainage Code တွေကို Free Download ရနိုင်ပြီး Water Service ကတော့ ဝယ်ယူမှပဲ ရနိုင်ပါမယ်။
Singapore Defence Force (http://www.scdf.gov.sg/) - Publications Website မီးသတ်ဌာန ရဲ့ လိုအပ်ချက် တွေကို ပြဌာန်း ပေးထား တာပါ။ မီးသတ်စနစ် တွေကို ဒီဇိုင်း လုပ်တဲ့ အခါ ပါဝင်ရမဲ့ လိုအပ်ချက်တွေပါ။
SMACNA CAD Symbols - DWG Format [ http://www.smacna.org/pdf/technical/dwg.zip ]
Singapore Defence Force: Publications Website
Singapore Standards eShop Website
NUS (National University of Singapore): [ http://www.nus.edu.sg/ ]
NTU (Nanyang Technological University) [ http:/www.ntu.edu.sg/ ]
Singapore Polytechnic (SP) [ http://www.sp.edu.sg/ ]
Ngee Ann Polytechnic (NP) [ http://www.np.edu.sg/ ]
Temasek Polytechnic (TP) [ http://www.tp.edu.sg/ ]
Nanyang Polytechnic (NYP) [ http://www.nyp.edu.sg/ ]
Republic Polytechnic (RP) [ http://www.rp.edu.sg/ ]
BCA (The Building and Construction Authority) ရဲ့ BCA Academy [ https://www.bca.gov.sg/academy/Courses_Tests.aspx ]
Kaplan University [ http://www.kaplan.com.sg/ ]
Ministry of Education Singapore Website (http://www.moe.gov.sg/) [ http://www.moe.gov.sg/education/private-schools/edp-list/ ]
National Library Board Singapore [ http://www.nlb.gov.sg/ ]
CAD / Modeling Software
AutoDesk’ s AutoCAD® (Full (or) LT) [ http://usa.autodesk.com/ ]
Bentley’ s MicroStation [ http://www.bentley.com/en-US/ ]
PDS Intergraph’ s PDS® [ http://www.intergraph.com/pds/ ]
Plantcon’ s PDMS [ http://www.plantcon.dk/uk/index.htm ]
PTC’ s Pro/ENGINEER [ http://www.ptc.com/appserver/mkt/products/home.jsp?k=403 ]
Solid Works [ http://www.solidworks.com/ ]
Posted by Ko Chaw - ကိုချော at 2:14 AM Labels: AutoCAD, CAD, Singapore
အချိန်ပေးပြီး သေသေချာချာရေးထားတာပါလား. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဆက်လက်ရေးပါအုံး အားပေးနေပါမယ်.